ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် Maggin Street (မဂ္ဂင်လမ်း), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Maggin Street (မဂ္ဂင်လမ်း)
*Location – Maggin Street, Tamwe Township.
*Price – 490 Lakhs
*Rooms formation — 3-Normal Bedrooms, 2-Air Con, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — Parquet, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township.
Property ID: S-1189962
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Maggin Street (မဂ္ဂင်လမ်း)
Maggin Street (မဂ္ဂင်လမ်း)
Tha Mein Bayan Street (သမိန်ဗရမ်းလမ်း)
Apartment Sale In Tarmwe (ID-266)
Dhamma Darna Street (ဓမ္မဒါနလမ်း)
Sateta Thukha Street (စိတ္တသုခလမ်း)
Thukha Street (သုခလမ်း)
တာမွေ, မေတ္တာညွန့်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အခန်း (Malihku Real Estate)
Dagon Thiri Street (ဒဂုံသီရိလမ်း)
တာမွေ၊ က္ကစ္ဆသယလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော မြေညီ+မှန်ခန်း တိုက်ခန်း ( Malihku Real Estate)
Kama Htan Street (ကမ္မဌာန်းလမ်း)
တာမွေမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
Nat Mauk Street (နတ်မောက်လမ်း)
Apartment For Sale in Tarmwe (ID-278)
အရမ်းတန်သော ဈေးဖြင့် တာမွေ Ocean အနီးရှိ ပြင်ဆင်ပြီးသား အလွှာနိမ့် တိုက်ခန်းကျယ် အရောင်း။
Thiri Street (သီရိလမ်း)
Eiksar Thara Street (ဣစ္ဆာသယလမ်း)
Aung Chan Thar Street (အောင်ချမ်းသာလမ်း)
Shweproperty ID: S-1189962